Ultrasonic yekucheka chisimbiso muchina unoshandiswa pane yakatenderera chirukwa
Iyo yekucheka yeiyo ultrasonic haidi iro rakapinza banga, zvakare haidi yakawanda yekumanikidza, hapana divi kukuvara uye kutyora zvachose. Panguva imwecheteyo, nekuda kweiyo ultrasonic vibration, kukweshera kudiki, hazvisi nyore kunamatira pane banga. Izvo zvinhu senge viscous uye elastic zvinhu.
Ultrasonic Kucheka Kuisa Mucherechedzo Muchina unoshandiswa pane yakatenderera Ruvara
Iyo ultrasonic jenareta inogadzira echimakanika simba ekudengenyeka anopfuura makumi maviri ezviuru zvakapetwa-nguva mazana mana nesere pasekondi kune iyo yekucheka blade, iyo yakacheka iwo maratidziro enzvimbo yekupisa inonyungudika, kuzadzisa chinangwa chekucheka zvinhu.
Pe Nylon Bhegi Kuchenesa Kuisa chisimbiso uye Kucheka Muchina
Muchina uyu unonyanya kuitirwa PE uye nylon mabhegi emukati ekupisa kupisa uye kucheka.Iine zvakanakira otomatiki jira kudyisa, otomatiki kupisa kudzvanya, otomatiki kucheka uye otomatiki jira kugashira.
Yedu bhegi yekuchenesa muchina inopa yakanaka yekuchenesa mhinduro ye fibc (iumbo mabhegi) anoshandiswa pakudya uye mishonga yekushandisa. uchishandisa pre-yakasvinwa mweya, iyo otomatiki yekuchenesa maitiro emuchina uyu unoona zvinobudirira kubviswa kwezvose zvakasununguka zvinosvibisa panguva yekucheka nekusona mashandiro
FIBC Pe Firimu Auto Bhodhoro Rakaumbwa Liner Kuisa Chisimbiso Kucheka Machine
Muchina uyu une mashandiro ekusimbisa pasi, kucheka pasi, kumucheto kwekusimbi, bhodhoro remuromo bhodhoro uye muromo wemabhodhoro. Iyo inogadzirisa dambudziko rekugadzirwa kwemanyorerwo e fibc jumbo bhegi.Muchina uyu wakarurama, kushanda kwemuchina mumwe kunogona kutsiva basa revashandi gumi zvisirinani.
p rakarukwa bhegi yekudhinda muchina
PP Yakarukwa Bag Kudhinda muchina yakanyatsogadzirirwa kupurinda mazwi nezviratidzo pamisika dzakarukwa nemasaga akaomeswa, asina kurukwa mabhegi, mabhegi ejute nemapepa, pamwe nebhokisi remabhokisi. Inogona kupedzisa multicolor kudhinda panguva imwe chete.
PP rakarukwa Bhegi Kucheka uye Sewing Machine
pp Yakarukwa bhegi yekucheka muchina otomatiki kudyisa, kufudza, otomatiki kuverenga. Chiedza chekuona sisitimu yekuona zvisina kugadzirwa zvigadzirwa, sirika otomatiki kumira uye mamwe mabasa mune imwe ye otomatiki komputa yekudzora bhegi yekucheka muchina.